राति निन्द्रा लाग्दैन ? यी हुन सक्छन् कारण, कसरी पाउने गहिरो निन्द्रा ? | Rato Kalam
तर कतिपय मानिसलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुन्छ। सुत्ने समयमा निन्द्रा नपर्नु, निन्द्रा परेपनि राति बिउँझनु र फेरि सुत्न नसक्नु, बिहान अति चाँडै आँखा खुल्नु अनिन्द्राको लक्षण हुन्। हुन त उमेरले ३० नाघेपछि अनिन्द्राको समस्या हुन्छ भन्ने डाक्टरहरु बताउँछन्। अनिन्द्रा भयानक समस्या हो जो अनेक रोगको कारण बन्छ । खासगरी अनिन्द्राको कारण मधुमेह, उच्च रक्तचापदेखि तौल बढ्नेसम्मको खतरा हुनेछ ।
– धेरै शारीरिक मिहिनेत र कम तनाव नै गहिरो निद्राको अचुक प्राकृतिक तरिका हो ।
२०७८ सालको बार्षिक राशिफल : पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस शेयर गर्नुहोस !
उर्लाबारी नगरपालिकाद्धारा कृषक समुहलाई पावर टिलर वितरण